Hollywood Celebrity များအကြိုက်တွေ့နေသော Etnia Barcelona မျက်မှန်များ – FemaleWear.net
အခုနောက်ပိုင်း Hollywood Celebrity တော်တော်များများဟာ မျက်မှန်တပ်ရပြီး ရှိုးထုပ်ရတာကို တော်တော်လေးနှစ်သက်နေကြတယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့ ဒီ ၂၀၁၈ မှာ နာမည်ကြီး Celebrity တိုင်းနီးပါး ဓာတ်ကျနေတဲ့ မျက်မှန် brand ကတော့ Etnia Barcelona ဘဲဖြစ်ပါတယ်။
နာမည်ကြီး celebrity တွေဖြစ်တဲ့ Rihanna, Margot Robbie, Lupita Nyong’o, Cara, Gigi နဲ့ Cate Blanchett တို့ကိုယ်တိုင် သဘောကျနှစ်သက်နေတဲ့ brand တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Etnia Barcelona ကတော့ စပိန် brand တစ်ခုဖြစ်ပြီး designer eyewear brand တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ မျက်မှန်တွေဟာ ဆန်းသစ်တဲ့နောက်ဆုံးပေါ်ဒီဇိုင်းတွေဖြစ်သည့်အပြင် color တွေနေနဲ့လည်း အရောင်သွေးစုံလင်လှတာကြောင့် fashion အတွက် အသုံးဝင်သင့်တော်တဲ့ brand တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Brand ရဲ့အားသာချက်ကတော့ quality အကောင်းဆုံး len တွေကို အသုံးပြုထားပြီး မှန်ကို ကုတ်ရာခြစ်ရာတွေ တော်ရုံနဲ့မထင်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်လာမယ့် season တွေအတွက်လည်း color နဲ့ texture တွေကို အကောင်းဆုံးဖန်တီးသွားမှာဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားထားပါတယ်။
We cannot swipe the smile from our faces to see model Gigi Hadid wearing our sunglasses from the Wild Africa collection. Get the look! (link in bio) #gigihadid #celebrities #sunglasses #eyewear #minerallenses
A post shared by Etnia Barcelona (@etniabarcelona) on Feb 28, 2018 at 9:39am PST
So excited to see Brad Pitt never takes our shades off, strolling through places with our Soder model. Get the look! (link in bio) #bradpitt #celebrities #sunglasses #sunnies #eyewear #minerallenses #HDfilter
A post shared by Etnia Barcelona (@etniabarcelona) on Feb 27, 2018 at 4:03am PST
Cara Delevingne is more thanasupermodel: she’safighter,arule breaker,astrong woman who defies convention. We feel so happy to see her in our sunnies #caradelevingne #celebrities #sunglasses #minerallenses #eyewearculture
A post shared by Etnia Barcelona (@etniabarcelona) on Mar 1, 2018 at 1:33pm PST
Little things make you bigger. Coming soon. #microglasses #tinyglasses #midnightlenses #eyewear #colors #culture #art #BeAnartist
A post shared by Etnia Barcelona (@etniabarcelona) on Mar 23, 2018 at 6:47am PDT
Our new SS18 eyewear collection directly from space. Coming soon. #microframes #tinyglasses #midnightlenses #eyewear #colors #culture #art #BeAnartist
A post shared by Etnia Barcelona (@etniabarcelona) on Mar 24, 2018 at 5:10am PDT
Tags: Celebrity, High-street brand